प्रेममा पर्ने वितिकै युवतीमा कसरी आउछ परिवर्तन जनिरखौ | Hulaki Online
२०७३ भाद्र ८, बुधबार १३:४९
2020 Sep 22, Tuesday 01:29
प्रेममा पर्ने वितिकै युवतीमा कसरी आउछ परिवर्तन जनिरखौ
प्रेम मान्छेलाई परिवर्तन गरिदिन्छ । यो भनाई तपाईँ हामी सबैले सुन्दै आएको कुरा हो तर यो भनाई सबैका लागि अलग अलग रुपमा लागु हुन्छ । सम्बन्ध जोडेपछि कोही धेरै इमोशनल हुन्छन हो त कोही परिपक्क । भने कोही सचेत कोही भने वास्तै गर्दैनन् ।
युवतीका कुरा गर्ने हो भने सम्बन्धमा जोडिपछि धेरै बानी परिवर्तन हुन्छन । हुन त परिवर्तन हरेकमा फरक फरक हुन्छ । जो सामान्य परिवर्तन हुन्छ । तर केही यस्ता कुरा छन् जो प्रेममा पर्ने वितिक्कै प्रायः युवतीको वानी परिवर्तन हुन्छ ।
१. निन्द्रा कम लाग्नु
यो त तपाईँहरुले पनि सुन्नु भएको होला कि प्रेममा पर्ने वितिक्कै निद हराम हुन्छ । प्रेममा परेपछि प्रायः युवतीहरू अवेर रातिसम्म सुत्दैनन् । रातिराति फोनमा कुरा गर्ने, च्याट गर्ने उनीहरूको वानी पर्छ । कुरा गर्दागर्दै विहान भएको भइसकेको हुन्छ, उनीहरुलाई पत्तै हुँदैन ।
२. आफैप्रति भरोसा हुँदैन
वैसमा त हरेक युवती आफूलाई राम्री ठान्छन् । तर प्रेममा परेपछि अझ बढी महसुस गर्न थाल्छन् । जसको परीणाम स्वरुप उनीहरुको धेरै समय ऐना अगाडि उभिनमै बित्छ । आफैप्रति भरोसा हुँदैन, आफै ऐनामा हेरेर मुस्कुराउने उनीहरूको वानी पर्छ ।
३. मोबाइलप्रति क्रेजी
केही समय पहिलेसम्म जो युवतीसँग मोबाइल पनि हुँदैनथ्यो, मतलब पनि हुँदैनथ्यो । उनीहरु अचानक मोबाइलप्रतिक क्रेजी हुन थाल्छन । मोबाईल हरेक पल हातमा हुन्छ । र, यही गल्तीले पनि अरु कोहीले मोबाइल लग्यो भने बबाल मच्चिन्छ । सम्बन्धमा परेपछि शायदै कोही युवती आफ्नो मोबाइलमा पासवर्ड विर्सन्छन्, होला ।
४. अचनाक बदलिन्छ मन पर्ने गीत
प्रेममा परेपछि हरेक पल रोमान्टिक स्टोरी, प्रेम गीत लगाउन थाल्छन् । केही समय पहिलेसम्म लव स्टोरी झुठो हुन्छ, भन्ने युवतीहरुलाई त्यही हुन्छ प्रेममा परेपछि ।
५. लगाउने र हिँडने शैली परिवर्तन हुन्छ
प्रेममा परेपछि प्रायः युवतीहरू पहिले भन्दा धेरै परिवर्तन हुन थाल्छन । उनीहरु हरेक समय फिटिङ हुन्छन । उनीहरुको ड्रेस स्टाइल परिवर्तन हुन्छ । हिँडाईको शैली पनि परिवर्तन हुन्छ ।
६. आफैलाई बाइपास गर्छन
प्रेममा परेपछि युवतीहरू आफ्नो लुक्सलाई लिएर गम्भीर हुन थाल्छन । केही कुरामा उनीहरु आफैप्रति जोगिन थाल्छन । केही समय आफ्नो सोच र आफ्नो राय भन्दा प्रेमीको सुझाव अपनाउन थाल्छन । उनीहरु आफ्नो कामको तरिका पनि प्रेमीको हिसावमा परिवर्तन गर्न सुरु गर्न थाल्छन ।
हुलाकीअनल़ाइन - २०७३ भाद्र ८, बुधबार १३:४९